Qarax Ka Dhacay Magaalada Kismaayo Iyo Saraakiil Iyo Askar Ku Le’atay. – Bogga Calamada.com
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada hoose waxay sheegayaan in qarax culus oo aad u xooggan lala eegtay saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka Jubbaland xilli ay ku sugnaayeen mid ka mid ah xaafadaha magaalada kismaayo.
Qaraxa oo ahaa mid aad u xooggan jugtiisana si wayn looga maqlay xaafadaha magaalada Kismaayo waxay ciidamada shabaabul Mujaahidiin ku weerareen goob isku imaatin ah oo ay ku kulansanaayeen saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan maamulka isku magacaabay Jubbaland.
Ilo wareedyo ku sugan magaalada Kismaayo waxay xaqiijiyeen in qaraxa uu dhacay xilli ay saraakiisha iyo maleeshiyaadka ku caweynayeen goobta isku imaatinka ah. waxaana jira khasaare lixaad leh oo soo gaaray maleeshiyaadka Jubbaland.
Ilo muhiim ah oo laga soo xigtay saraakiil ciidan oo ka tirsan xarakada shabaabul Mujaahidiin waxay xuseen in qaraxa ay ku dhinteen 3 askari oo ka tirssanaa Jubbaland iyo dhaawaca 17 kale kuwaas oo isugu jira saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan maamulka uu fadhigiisu yahay magaalada Kismaayo.
Maleeshiyaadka dhaawacmay waxaa ka mid ah taliye sare oo lagu magacaabo Shukri Faarax Ducaale oo loo garan ogyahay Mafoofe kaas oo dhaawiciisu yahay mid garraab ah waxaana la dhigay mid ka mid ah cisbitaallada maamulka Axmed Madoobe.
Qaraxan ayaa ka mid ah qaraxyada ugu khasaaraha badan oo maalmo kooban gudahood ka dhaca magaalo madaxda maamulka Axmed Madoobe dhowaan waxaa sidan oo kale qarax loogu weeraray mid ka mid ah saraakiisha maamulka Jubbaland qaraxaas oo ka dhacay isla magaalada Kismaayo.